एमाले अग्रता कायमै बिहानसम्म कसले कति जिते ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एमाले अग्रता कायमै बिहानसम्म कसले कति जिते ?
काठमाडौं । स्थानीय तहको मतगणनाको परिणाम आउने क्रम जारी छ । वैशाख ३१ गते आइतबार सम्पन्न २ सय ८३ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म २ सय २० भन्दा बढी स्थानीय तहको परिणाम सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक परिणामअनुसार एमालेले आफ्नो अग्रता कायम राखेको छ भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको छ । पछिल्लो परिणामअनुसार एमालेले २७ नगरपालिका सहित ९३ स्थानमा विजयी हासिल गरेको छ भने ३२ स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ ।
यस्तै, नेपाली काँग्रेसले अहिलेसम्म ८७ स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने २७ स्थानमा अगाडि छ । माओवादी केन्द्रले भने अहिलेसम्म ४२ स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने ७ स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ । तीन स्वतन्त्रसहित नयाँ शक्ति, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोचाले एक एक स्थानमा जिेतका छन् ।